Ogologo njem njem njem | Maka Ịkpọ oku oku + 91-993.702.7574
Ị na-achọ nchịkọta njem njem njem na Bhubaneswar? Sand Pebbles Njegharị N Njem na-enye ndị kasị mma njem njem nchịkọta na ọnụ ọnụahịa. Ụgbọ njem abụrụ akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ndị njem; ndị njem njem na njem nleta ndị dị iche iche. Enwere nkwekọrịta n'ozuzu na njem na-agbasawanye ma ọ bụrụ na ọ dị mma usoro njem. Sand Pebbles ghọtara eziokwu ahụ ma gbalịsie ike inye ndị ahịa ya mma. Jiri nlezianya na-eme njem ma chọpụta ihe mara mma ma mara mma na ịnyagharị. Onyenye na-agụnye nchịkọta njem ndị njem njem pụrụ iche maka PURI - BHUBANESWAR. Ejiri nchịkọta nchịkọta ndị a dị n'okpuru ebe a. Kpọtụrụ anyị na + 91-993.702.7574 maka mgbakwunye gị ọzọ, ya na Sand Pebbles Tourist Transport Packages.
02 ehihie na abalị Puri & 02 ehihie na abalị Bhubaneswar
Usoro njem TR-904
04 NIGHTS / 05 ụbọchị
02 ehihie na abalị Puri & 01 Night Bhubaneswar
Usoro njem TR-903
03 NIGHTS / 04 ụbọchị
Night 01 Puri & 01 Night Bhubaneswar
Usoro njem TR-902
02 NIGHTS / 03 ụbọchị
Night 01 Puri
Usoro njem TR-901
Ụbọchị 01 NIGHT / 02